Cdma 800 ကို ရန်ကုန်တစ်မြို ့လုံး သုံးနိုင်ပါသ — MYSTERY ZILLION
Cdma 800 ကို ရန်ကုန်တစ်မြို ့လုံး သုံးနိုင်ပါသ
Cdma 800 ကို ရန်ကုန်တစ်မြို ့လုံး သုံးနိုင်တော့မယ်လို့ ဂျာနယ်တွေမှာ ရေးကြပါတယ် ။
တစ်ချို ့တွေပြောတာလည်း အခု ရန်ကုန်တစ်မြို ့လုံး သုံးလို့ရနေပြီတဲ့။
စမ်းသုံးဖူးတဲ့သူရှိပါသလားခင်ဗျာ ... သိပါရစေ ....
အခု ထိ တော့မရသေးပါဘူး
Thi Ha wrote: »
ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်း သတင်းများအရ မေလဆန်းမှစတင် ရရှိမယ်လို့ကြားတယ်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်း တခုက ၅သိန်းတန် cdma 800 ကို နေ့ချင်းပီး ၀ယ်လို့ ရအောင်လဲ elite teach ကလုပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။
တကယ်သာဆိုရင်တော့ သတင်းကောင်းပဲလို့ ဆိုလို့ရမယ်။
Elite Tech က တစ်ကယ်လုပ်ပေးနေတာလား... နေ ့ခြင်းပြီးဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ မလျှောက်ပဲနဲ ့၀ယ်နိုင်တဲ ့သဘောကိုပြောတာလားအကို...
သေချာလေးပြောပြပါလား..နေ့ချင်းပြီးဆိုတော့..ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းခွံတွေ၀ယ်သလိုပဲ..၅ သိန်းပေးတာန့့ တစ်ခါတည်းရ..အဲ့ဒီလိုလားမသိဘူးနော်....
၅ သိန်းနဲ့ ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးသုံးခွင့်ရှိမယ်ဆို မဆိုးဘူးဗျ.လူတိုင်းကိုင်ကြမှာပဲ...တကယ်ဖြစ်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ...
နေ ့ချင်း၀ယ်လို ့ရတယ်ဆိုတာ ပေါက်တဲ့သူတွေမှပါ မပေါက်တဲ့သူတွေ၀ယ်လို ့မရပါဘူး
ကျွန်တော်သူငယ်ချင်း၀ယ်မလို ့သွားမေးတုံးက ဆက်သွယ်ရေးကသူတွေပြောလိုက်တာပါ
သူတို ့အပြောအရတော့ ဂျာနယ်တွေကမလှိမ့်တစ်ပါတ်ရေးတာဆိုပဲ ဘယ်ဟာအမှန်မှန်းကိုမသိတော့ပါဘူးဗျာ
ကျွန်တော်သိထားတာက 800 MHz က စီဒီအမ်အေတိုင်တွေထောင်ပြီးပြီမို. နယ်မြေအကန်.အသတ်နဲ.သာရတော.မယ်လို.ကြားတယ်ခင်ဗျ။ အရင်တုန်းက စစထွက်ချင်းတုန်းကသာ ရနေတာခင်ဗျ။ နောက်ပိုင်းကျတော. မရတော.ဘူးလို.ပြောကြတယ်။
ငါးသိန်းပေးတဲ့အပြင် prepaid ပုံစံမျိုးပြောရတာပါ သူမှာ top up card ဆိုတာပါပါတယ် အဲဒီ card မှာပါတဲ့ နံပါတ်အတိုင်းထည့်ရတာပါ ၅ကြိမ်လားမသိ မှားခွင့်ရှိပါတယ်
ငါးကြိမ်အထက်ဆိုရင်တော့ မြန်မာဆက်သွယ်ရေးက Brutal Forcing လုပ်တယ်ယူဆပြီးတော့ ပိတ်လိုက်မှာပါ နောက် နိုင်ငံခြားကို ခေါ်ချင်ရင်သို့နိုင်ငံခြားမှာ call ၀င်ချင်ရင်
သက်သက် FEC card ဆိုတာထည့်ရပါတယ် ကျန်တာကတော့ ကတ်ဖုန်းတွေအတိုင်းပါပဲ နောက်သူက တခြားအမျိုးအစားတူ CDMA ဖုန်းကနေလှမ်းပြီးတော့ ကိုယ်ဖုန်းအတွက်
ငွေသွင်းလို ့ရပါတယ် ကိုယ်ဖုန်းအခိုးခံရ သို ့ပျောက်ဆုံးပါကလည်း လှမ်းပြီးတော့ code နံပါတ်ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်ပိတ်နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်သိချင်တာ အဲဒီဖုန်းတွေကို နိုင်ငံခြားက
ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော. ၈၀၀ MHz က နယ်မြေအကန်.အသတ်နဲ.သာ သုံးနိုင်တယ်လို. ကြားတယ်ခင်ဗျ။ အရင်တုန်းက စစထွက်ချင်းတုန်းကသာ တစ်မြို.လုံးရနေတာ နောက်ပိုင်းကျတော. မရတော.ဘူး လို.ကြားတယ်ခင်ဗျ။
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ကိုလိပ်ပြောတာမှန်ပါတယ်ဗျာ။ကျနော်ပြောဖို့ကျန်သွားလို့ပါ။ဒီလိုဗျာကျနော့် အမေရဲ့သူငယ်ချင်းက MPT ကဗျ။အဲဒါကြောင့်မို့ သူတို့သတင်းတွေက မှန်တာများတယ်။သေချာပြောရရင်ကိုလိပ် ပြောသလိုဘဲ ပေါက်တဲ့လူတွေက အလုပ်မရှုပ်တော့ဘဲ နေ့ ချင်းပီးလုပ်နိုင်မှာဘာ။
Elite Tech က တစ်ကယ်လုပ်ပေးနေတာလား... နေ ့ခြင်းပြီးဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ မလျှောက်ပဲနဲ ့၀ယ်နိုင်တဲ ့သဘောကိုပြောတာလားအကို..
ကိုBrain Hacker ရေ နေ့ချင်းပီး၀ယ်ချင်ရင်တော့ ကျနော့် ဆီPM လိုက်ပါ။အမြတ် ခြောက်သောင်းလောက်ပေးရုံနဲ့ ၀ယ်လို့ရအောင် free ကူညီပေးပါမယ်။အမည်ပေါက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။
[/quote]ကျွန်တော်သိချင်တာ အဲဒီဖုန်းတွေကို နိုင်ငံခြားက
ကိုလိပ်ရေဒီလို ထင်တယ် +95 173****** မစမ်းတော့မစမ်းဘူးသေးဘူး။
ဟုတ်ကဲ ့ပါအကိုရေ ကျွန်တော့်ဘက်က ကျိန်းသေမယ်ဆိုရင်တော ့ကျွန်တော် pm ကျိန်းသေပို ့လိုက်ပါ့မယ်ခင်ဗျား...
အခုလိုပြောပြပေးတဲ ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျား...
ကျွန် တော် အခု သုံးနေ တဲ. ဖုန်း က လမ်း မ တော် မြို. နယ် က ပါ.....့ကျွန် တော် သုံး ကြည်. သ လောက် တော. မြို. ထဲ တွေ အ ကုန် ရ နေ ပါ သေး တရ်... ဒါပေ မရ်. မြေနီ ကုန်း ကို ကျော် ပြီး ၆ မိုင် ဘက် ကို သွား ရင် တော. မ ရ တော.ပါ ဘူး..... ကျန် တဲ. နေ ရာ တွေ တော. အ ကုန် ရ နေ သ လို ပါ ပဲ..... ကျွန် တော်ရန်ကုန် မြစ် ၀ သဘောင်္ပေါ် အ ထိ သုံး ကြည်. ဘူး ပါ တရ်.... အဲ ဒီ လောက် အ ထိ ရ ပါတရ်..... ဘယ် အ ချိန် ဘယ် လောက် အထိ အဲ လို ရ နေ မ လဲ တော. မ သိ ပါ ဘူး..... သေ ချာ တာ က တော. ဂျီ ထက် ကို လိုင်း ပို ကောင်း ပါ တရ်.... အလုံး ရေ နည်း သေး လို. ထင် ပါ တရ်....
lov3elixir wrote: »
ဖြစ်နိုင်ရင် CDMA အကြောင်းကို Update ရနိုင်သလောက် ရေးပေးပါလားဗျာ
ကျွန်တော်က နယ်ဘက်ရောက်နေလို့ Information နည်းနေလို့ပါ.
ဟုတ်ပါတယ်။... တစ်မြို ့လုံးနီးပါးကိုရနေပါပြီ.. ကျွန်တော်ဆိုရင် ဗိုလ်တထောင်မြို ့နယ်မှ စကာ အလုံ ကြည့်မြင်တိုင်
သု၀ဏ တာမွေ ပန်းပဲတန်း ကျောက်တံတား ကျောက်မြောင်း ပုဇွန်တောင် တော်တော်များများရပါတယ်..